Dadka khasabka lagu tarxiilo oo soo batay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lars Hedelin/Scanpix.
Dadka khasabka lagu tarxiilo oo soo batay
La daabacay torsdag 25 juli 2013 kl 15.33
Waxaa soo kordhay dadka khasabka dalka looga masaafuriyo, dadkaas oo badankood loo cuskado qaraarka Dublin. Qaar ka mid ah ayaa ku jira tirakoobka dadka dalka laga masaafuriyo, laakiin wax lug ah kuma laha ololihii ciidamada boliisku bilaabeen oo la magac-baxay Reva, ayuu yiri Stefan Sinteus oo madax ka ah boliiska dembiyada ee gobolka Skåne.
- Qayb weyn ayey ka tahay tiradaan kor u kacday.
Laakiin miyey arrintaani lug ku leedahay ololihii Reva ee boliisku dadka sharci-darrada ah ku baadigoobayey?
- Maya, wax lug ah kuma leh dadka aan masaafurintooda u cuskanno qaraarka Dublin.
Qaraarka Dublin wuxuu qeexayaa in dadka soo gala mid ka mid ah dalalka ka tirsan heshiiskii Schengen, sida Talyaaniga oo kale, oo magangelyo ka codsaday Iswiidhen dib loogu celin karo dalkii ay markii hore soo galeen haddii uu dalkaasi ka tirsan yahay dalalka heshiiska Schengen, si arrintooda magangelyada halkaas loogu baaro oo wax looga qabto.
Ololihii Reva oo la bilaabay in sannadkii 2009 oo ahaa in waddooyinka lagu istaajiyo dad ajnebi ah wuxuu u taagan yahay hawlfulin waafaqsan ilaalinta sharciga oo wax ku ool ah. Dhaleecayn badan ayaana boliiska ka soo gaartay habkii uu u baadigoobayey dadka sharci-darrada ah isagoo istaajinayey qof wasta oo muuqaal ajnebi leh.
Hadda boliisku wax ayuu ka beddelay hababka dadka loo raadiyo oo ay mid ahaayeen in dadka raacaya tareenada hoos maraya la istaajiyo oo la baaro. Stefan Sinteus wuxuu sheegay in aysan iman habab cusub oo lagu beddelo hababkii hore.
- Run ahaantii ma jiraan. Weli waxaa jira hababkii hore oo la isticmaali jirey. Dhanka kale wadashaqayn ballaaran ayaa ka dhexeysa Hay’adda Socdaalka, boliiska iyo ciidamada asluubta si loo dedejiyo hawlaha masaafurinta, waayo mar walba oo la soo wabto qof, waxaa ku baxa kharash farabadan.
Ma la oran karaa waxaa la xoojiyey habka hay’aduhu wararka isu dhaafsadaan?
- Ha, waana hab dhaqso ah oo lagu fulin karo go’aanka masaafurinta.
Waxaase jira meelo boliiska ka xanniban oo uusan dadka la baadigoobayo ka baari karin. Waxaana meelahaas ka mid ah dugsiyada, kaniisadaha iyo goobaha daryeelka caafimaadka.
Natiijooyin badan badanaaba lagama helo baaritaanada boliisku dadka ku istaajiyo waddooyinka magaalada, laakiin waxaa dad badan oo go’aan diidmo la siiyey laga helaa goobo shaqo oo kala duwan.
- Boliiska waddooyinka dadka ku istaajiyaa waxay badanaaba la kulmaan tiro aad u yar, laakiin waxaan warar xog-ogaal ah oo aan guul ku gaarno ka helnaa goobaha shaqada.